Thola ukuthi ikhokhwa kanjani imali ekhokhelwa ePortugal | Izindaba Zokuhamba
Injani imali ekhokhelwa ePortugal
Ukuhambela ePortugal ngemoto kujwayelekile uma sivela eSpain, ngakho-ke kufanele wazi izinketho esinazo ngomgwaqo. Yize kungenzeka ukuthola imigwaqo ngaphandle kwama-toll, empeleni yimigwaqo ethatha isikhathi eside kakhulu. Inketho enhle lapho uvakashela iPortugal futhi usuka kwenye indawo uye kwenye ukusebenzisa ama-tolls. Yingakho sizobona ukuthi imali ekhokhelwa ePortugal isebenza kanjani.
Lezi ama-tolls atholakala eceleni komgwaqo omkhulu futhi ezikhathini eziningi azisebenzi njengasemphakathini wethu, ngakho-ke kungcono ukuba nombono wokuthi yini okufanele siyenze. Kungaleso sikhathi kuphela lapho singakwazi ukuhlela kusengaphambili uhambo ngemoto ePortugal ukubona amadolobha amakhulu namaphuzu wokuthakazelisa.
1 Ungayikhokha kanjani imali ekhokhelwa ePortugal
1.1 Khokha ngetoll toll electronic
1.2 Ikhadi le-Virtual prepaid
2 Kwenzekani uma ama-toll engakhokhelwa
3 Wazi kanjani ukuthi ngizokhokha ini
Ungayikhokha kanjani imali ekhokhelwa ePortugal
Kuze kube ngu-2010 sathola umqondo ofanayo nalapha lapho kwakukhona khona amadokodo okukhokha intela mathupha. Kepha kusukela lapho zisusiwe futhi zikhokhwa ngenye indlela. Baningi abantu abadidekile lapho bebona ukuthi awekho amadokodongoba abazi ukuthi kufanele bakhokhe kanjani. Noma kunjalo, inqubo ilula kakhulu. Kunezindlela eziningana zokukhokha umgwaqo omkhulu ePortugal ama-tolls.
Khokha ngetoll toll electronic
Enye ye izindlela zokukhokha onazo ukusebenzisa i-electronic toll device. Lolu hlobo lwedivayisi lungathengwa ezweni lethu futhi lusebenzela umgwaqo wethu omkhulu, ngokuba wusizo ngempela. Kungumqondo okhululeke kakhulu ngoba ngazo singathola izaphulelo emizileni ejwayelekile futhi singazisebenzisa kusuka eSpain. Uma sineqoqo lama-toll elektroniki elithengwe ezindaweni ezinjengeBanco Santander, iBanco Popular, iLiberbank, iCaja Rural noma i-Abanca, phakathi kwabanye, singalisebenzisa ngaphandle kwenkinga. Kwezinye izindawo sizozwa ibhiphu eyikhiphayo lapho idlula, kepha kufanele kubhekwe ukuthi kwezinye izindawo ayishayi. Lokho akusho ukuthi akwenzeki, ngoba ilayishwa noma kunjalo. Le ngenye yezindlela ezinethezekile kunazo zonke esingazithola, ikakhulukazi uma siya kaningi ePortugal noma sisebenzisa umgwaqo omkhulu ngokuqhubekayo.
Ikhadi le-Virtual prepaid
Enye indlela yokukhokha imali ePortugal yile ukuxhumanisa ipuleti lelayisense yemoto ekhadini. Lokhu kwenziwa cishe, ukuze ikhadi lixhunyaniswe nokubhaliswa futhi izinkokhelo zikhokhiswa. Kungenziwa kulokho okubizwa nge-EASYToll, imizila lapho sifaka khona ikhadi ngasikhathi sinye lapho ikhamera ifunda khona ipuleti lelayisense bese ibaxhumanisa. Lokhu kuzoqhubeka nokukhokhisa izinkokhelo endleleni. Okubi wukuthi le sevisi sinayo kweminye yemigwaqo yayo emikhulu efana no-A22, A24, A25 no-A28.
Okunye Indlela yokukhokha ngeTollService. Le sevisi isivumela ukuthi sikhokhele izinsuku ezintathu noma ngohambo oluthile. Inomkhawulo wokubhaliselwe okuthathu ngonyaka futhi kuphela kulabo abanokuqoqwa kwama-toll kagesi. Lokhu kuyindlela enhle uma sizothatha uhambo olufushane noma uma, ngokwesibonelo, siya ezikhumulweni zezindiza ePorto noma eLisbon. Inesikhathi esilinganiselwe kepha kuyindlela enhle yokuphunyuka ngempelasonto nohambo lokujikeleza, ukuze ungathathi izinkokhelo eziphakeme.
Omunye inketho ebonakala ikhululekile ukusebenzisa iTollCard, ukuhlobanisa ukubhaliswa kwethu nokukhokha kusengaphambili esikwenza kusengaphambili ku-inthanethi. Kukhona amanani afinyelela kuma-euro angama-40 futhi ubude bawo bungunyaka owodwa, ngakho-ke kunenzuzo enkulu kunezinye izinketho. Lokhu kuzosinika inkululeko ethe xaxa, yize kuyindlela enhle uma sihlela ukuthatha uhambo olude noma ngaphezulu kwezinsuku ezintathu.
Kwenzekani uma ama-toll engakhokhelwa
Ukukhokha intela ePortugal kuphoqelekile njengaseSpain nase Ukwehluleka ukwenza lokho kubandakanya icala lentela lokho kunenhlawulo ephezulu. Kunabantu abaningi abacabanga ukuthi ngoba awekho amadokodo, ungavele udlule, ugweme ukukhokha. Inkinga ukuthi kukhona amakhamera futhi yonke into iyarekhodwa, ngakho-ke uma besimisa, bangenza ukuthi sikhokhe kuze kube kayishumi kulokho okufanele sikhokhe. Banikwe igunya futhi lokuhlanganisa imoto yakho kuze kukhokhwe inani lesikweletu. Akufanele neze ukuzifaka engozini, ikakhulukazi lapho sikwazi ukukhokha kalula nge-Intanethi.
Wazi kanjani ukuthi ngizokhokha ini
Singase sibe nohambo oluhleliwe futhi singazi ukuthi leyo mali ingasilahlekiselani. Kubalulekile, uma sifuna ukuhlela konke futhi sazi ukuthi sisebenzisani, lokho Masibuye sibale ukuthi yini esiyisebenzisayo nemoto kanye nomgwaqo. Kungakho ungathola amathuluzi kwi-Intanethi ukuthola izindleko eziqondile zemizila ethile nemigwaqo emikhulu esingayithatha, ngoba kwesinye isikhathi sinezinye izindlela ezihlukile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Injani imali ekhokhelwa ePortugal